Gabôna hatrany Môzambika, mampanontany tena an’ireo artista ny dikan’ilay fomba fiteny hoe “Ny Tontolo Atsimo” ao anaty fampirantiana iray vaovao ety an-tambajotra · Global Voices teny Malagasy
Fampirantiana mamerina mamaritra ny atao hoe "Atsimo" aorian'ny valanaretina coronavirus
Voadika ny 30 Septambra 2020 5:44 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Español, Català, English
«Aiza ny Atsimo» atolotr'ireo artista 90 avy amina tanàna samihafa manotany tena momba ny dikan'ilay fomba fiteny hoe «Ny Tontolo Atsimo». Sary natolotra am-pitiavana avy amin'ny Fondation Moleskin.
[Raha tsy asiana fanamarihana manokana dia mankany amina lahatsoratra amin'ny fiteny anglisy ny rohy rehetra]
Ny “Global South” (Ny Tontolo Atsimo). Fomba fiteny iray mavesatra sy miaty hevitra pôlitika izay mazàna no ampiasaina hanondroana ireo faritra tena mifanao atsimo sy avaratra eto ambonin'ny tany.
Mihoatra ny 90 ireo tanora artista avy ao Gabôna, Môzambika, Fanjakana Mitambatra, Etazonia, sy hatramin'ireo mpitady fialokalofana, mpitsoaponenana ary mpifindra monina avy any Nizerià, Gambia sy Kamerona ka mipetraka ao Italia, no manontany tena momba ny fotokevitra “Ny Tontolo Atsimo”, ao anatin'ilay fampirantiana vaovao virtoaly nomeny lohateny hoe “Aiza ny Atsimo?” izay hatomboka amin'ny volana ho avy io.
Ao anaty fanambaràna an-gazety iray, hamafisin'ireo mpikarakara ilay fampirantiana fa ny fampiasàna ny fomba fiteny hoe “Global South” (Ny Tontolo Atsimo) dia matetika “hitsin-dàlana iray entina milaza ampahany amin'ity planeta ity ho toy ny ambany, tsy mivoatra na mahantra / nampahantraina”. Ny hafa mampiasa azy amin'ny fomba azo ampifanolosoloina amin'ny hoe “tiers monde” (Tany an-dalampandrosoana) [fr], izay mametraka olana sy mamitaka, nitranga nandritra ireo ady mangatsiaka nentina namaritana ireo firenena tsy nomba ny tatsy sy ny taroa, sady tsy nitanila ho any amin'ny Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) [fr], no tsy nitanila ho any amin'ny Pacte de Varsovie [fr].
These young people reclaimed their power to define the word as a very intimate notion that varies according to the place where they are and where they want to reach. The exhibit powerfully reveals that there cannot be any south without the gaze we invest it with.
Tsy olana na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao no misy antsika, misy foana ny “Atsimo” hoy ny nambaran'i Simon Njami, iray amin'ireo mpiaraka mikarakara ilay fampirantiana. “Naverin'ireo tanora ireo nalaina ho an-tànany indray ny fahefana manome vala famaritana ho an'ilay fomba fiteny, ho toy ny fomba filaza faran'izay akaikin'ny fo ary miovaova arakaraky ny toerana misy an-dry zareo sy izay tiany hotratrarina. Amin-kery no avoitran'ilay fampirantiana fa tsy afaka hisy “atsimo” raha tsy isika no mametraka izay fomba fijery izay.
Manomboka ny 1 Oktôbra hatramin'ny 30 Oktôbra 2020, horaisin'ilay fampirantiana an-tànana ny fitantanana ny pejy Instagram an'ny Moleskine Foundation.
Ireo asakanto dia vokatry ny fahaizamamorona tao amin'ny hetsika AtWork an'ny Moleskine Foundation, “atrikasa iray fampianarana mitety tanàna natao mba hivoahan'ireo fahaizamamorona ananan'ny tanora amin'ny alàlan'ny fihevitra mahay mitsikera, adihevitra lalina ary ny fahafantarany ny tenany”.
Tao Dakar, Senegal no natomboka ny AtWork tamin'ny 2012, ary nanomboka teo dia nitety an'i Afrika sy tany ivelany aza “mba ho aingampanahy hananganana tambajotra iraisan'ireo afrikàna mpisaintsaina sy erantany ka manana famoronana” hoy ny Moleskin Foundation [fr].
Frank Noel Makosso, mpandray anjara tamin'ny AtWork, Libreville 2019. Saripika an'ny Bunny Studio.
Ireo artista, 18 hatramin'ny 27 taona daholo, dia mamerina mametraka fanontaniana momba ireo fomba fisaina ny atao hoe fahaleovantena, ny maripamantarana manokana, ny sisintany ary ny tantara.
Tamin'ny fanolorana kahie voajirika niisa 90, nohaingoana ary novaina, noforonin'ireo artista tany amin'ireo tanandehibe AtWork tsirairay izay nanaovana ireo atrikasa tamin'ny 2019, tao anatin'ny fotoana iray izay niadian'ny ny olona hevitra momba izay fomba hananganana fiarahamonina tsy mitanila ao anatin'izao tontolo izao aorian'ny valanaretina, ilay fampirantiana kosa namerina namaritra ilay teny feno ideolojia”, hoy ilay fampitan-kafatra ho an'ny gazety.
Ilay atrikasa AtWork tao Libreville dia nahasarika tanora mpanao soradihy, mpanao tefiendrika (designers), mpandraharaha, poeta mpanao ‘slam’, mpanatontosa sarimihetsika, mpilalao tantara, mpanao asatanana, mpakasary ary mpanabe izay nihaona mba “hiampiady hevitra, hifanakalo sy hikaroka ny ‘Atsimo’-ndry zareo manokana.”
Nandray anjara tamin'ilay atrikasa AtWork Libreville i Frank Noel Makosso, tompondakan'ny ‘slam’, sokajy tononkalo, tao Libreville, ao Gabon. Aminy ny teny hoe “Atsimo” dia toy ny “ilay izaho ao anatiko lalina”. Ho an'ilay fampirantiana, tao anatin'ny asakanto iray nomeny anarana hoe “Ahoana no enti-milaza ny tsy hay tononina?“[fr], namorona fanambantambàran-teny ahitàna teny frantsay sy anglisy nalaina tanaty gazety sy gazetiboky nohetiketezana sy naraikitra i M. Makossa.
“Ahoana no enti-milaza ny tsy hay tononina?» an'i Frank Noel Makosso, Libreville, Gabon. Miaraka amin'ny fanomezandàlana am-pitiavana avy amin'ny Moleskine Foundation Collection.
Indro ny topimaso tamin'ireo asakanto vokatra avy amin'ny atrikasa AtWork Libreville 2019:
Ny AtWork Maputo 2019 dia nahitàna atrikasa iray naharitra 5 andro notarihan'i M. Njami, niarahany niasa tamin'i Pfwura Ndzilo sy Anima, tamin'ny Novambra 2019. Artista 25 avy ao an-toerana no nihaona tao amin'ny Tranombakoka nasiônaly tao Môzambika mba hitrandraka sy hiady hevitra momba ny dikan'ny hoe “Atsimo”. Fampirantiana iray tao amin'ilay Tranombakoka no namarana ny atrikasa, teo anelanelan'ny Novambra 2019 sy Janoary 2020.
Indro ny topimaso tamin'ireo asakanto vokatra avy amin'ny atrikasa AtWork Maputo 2019:
“Our goal is to create a welcoming and creative space where young people can think differently, get out of their comfort zones, and are free to question the society around them,” said Adama Sanneh, CEO of the Moleskine Foundation.
“Ny tanjonay dia ny hamorona habaka iray tsara fandray sy misy famoronana ka hahafahan'ireo tanora misaina amin'ny fomba hafa, mivoaka ny fari-piadànana misy azy ireo ary malalaka afaka hametraka fanontaniana momba ny fiarahamonina misy azy ireo”, hoy ny nambaran'i Adama Sanneh, filoha tale jeneralin'ny Fondation Moleskine.
Simon Njami (havia) sy ireo mpandray anjara tamin'ny AtWork nandritra ny AtWork Libreville, Gabon, 2019. Saripika an'ny Bunny Studio.
Hametraka an'i Gabon ho lohalaharana amin'ny toekarena feno famoronana
Ny tanàna amorontsirak'i Libreville, renivohitr'i Gabon, dia antsoina hoe ilay “tanàna afaka” satria tamin'ny 1849 izy dia nambara tamin'ny fomba ofisialy ho tanànan'ireo andevo nomena fahafahana. Ankehitriny, io no iray amin'ireo tanàna dimy lafo fiainana indrindra ao Afrika, saingy tsy dia omena lanja mandrakariva ao ny fahaizamamorona. Tsy misy ivontoerana na toerana fampirantiana, ary soa aza fa eo ny fandaharanasa ara-kolontsaina atolotry ny Ivontoerana frantsay.
Bunny Claude-Massassa, mpandray anjara tamin'ny AtWork Kampala 2018 fiarahamiasa tamin'ny AtWork Libreville 2019. Saripika an'ny Bunny Studio.
Tamin'ny nananganany ny Mukasa [fr], fikambanany tsy miankina amin'ny fanjakana, i Bunny Claude-Massassa, artista ‘multimedia’ ary efa nandray anjara tamin'ny AtWork 2018, dia nanapaka hevitra ny hitsabo ilay tsy fahampiana habaka ao Libreville natao ho an'ny kolontsaina mahaleotena.
Izy araka izany no nanomboka voalohany ny habaka tsy miankina amin'ny fanjakana ao an-tanàna, natao ho an'ireo adihevitra momba ny kolontsaina sy ny fahaizamamorona. Ny Mukasa no nandray ny atrikasa AtWork 2019, “Aiza ny Atsimo”, niarahana tamin'ny Mozea Nasiônaly ao Gabon sy ny Ivontoerana frantsay.
Ny fotokevitra dwabi no aingam-panahy niaingan'ny Mukasa; dwabi, vita tamin'ny tady narandrana, midika hoe “fanantonana harona” ao Gabon, sy amin'ny fitenim-paritra punu.
Ilay dwabi – izay samy mampiasa azy na lahy na vavy mba hitaterana entana mavesatra amina làlana lavitra – dia lasa entina milaza ireo hetsika rehetra ataon'ny Mukasa, amin'ny fiandrandràna ny ho lasa fifamatorana mafy eo amin'ny zavakanto, kolontsaina ary ny daholobe.
Kendren'ny Mukasa ny “hamorona, hampivoatra ary hanohana rafi-piainana voajanahary iray mirindra sy misy fahaizamamorona” mba hanamafisana ny sehatra artistika ao Gabon sy hitazonana anjara toerana fototra, ary ao anatin'ny tsena any amin'ny faritra. Misy toerana natokana ho an'ny fanovozam-baovao ary habaka iray ho fampirantiana ao anatin'ilay ivontoerana, misy ihany koa toerana natao ho fihaonana sy fialantsasatr'ireo artista.
Ny tranoben'ny Mukasa ao Libreville, Gabon, dia manome habaka iray ho an'ireo artista mba hihaonan'izy ireo, handalinany sy hanaovany fampirantiana. Saripika azo maimaimpoana avy amin'ny Fondation Moleskin.
Tamin'ity taona ity, nohamafisin'ny ministeran'ny kolontsaina sy ny zavakanto ao Gabon ny fanohanan'ny fanjakana ireo orinasa misehatra amin'ny kolontsaina sy asa famoronana (ICC), tamin'ny fametrahany ny fenitra voalohany araka ny lalàna, ho entina mitrandraka ireo fahafahana ara-tsôsialy sy toekarena vao mipongatra, hoy ny [fr] UNESCO.
Mampiakatra an'i Gabon ho eny an-tampon'ny tetezamitan'i Afrika Afovoany ho any amin'ny toekarena feno famoronana manara-drafitra izany.
Hatramin'ny niantombohan'ny valanaretina, voadona ny sasany tamin'ireo toekarena feno famoronana tao amin'ilay tanibe – indrindra fa ny sehatra tsy manara-drafitra no mamelona azy. Noho ny fanafoanana nateraky ny coronavirus, voatery niato kely tamin'ny fandaharanasany ireo mpiangaly mozika sy artista mpanao asakanto natao hojerena, izay amin'ny ankapobeny dia mihodina sy mandray anjara amin'ireo fampirantiana mivantana. Fa amin'ny ankapobeny, mampiasa olona manodidina ny dimy hetsy eo ny sehatry ny kolontsana ao amin'ny tanibe Afrika, ary miteraka fidirambola 4,2 miliara dolara amerikàna manerana an'i Afrika.
Mozambika 4 herinandro izay